Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Chọpụta ụbọchị Rolli na -atọ ụtọ na Cultural Genoa
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akwụkwọ akụkọ Italy • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Oge Rolli na Cultural Genoa
Ndị ọbịa ga -enwe ụbọchị asaa mara mma iji chọpụta nka Italiantali na nnukwu ụlọ Renaissance na Baroque nke Genova City na Italy.
Njem na Genoa nke narị afọ ọla edo, n'etiti ihe ọkpụkpụ, frescoes, na ubi, bụ oghere pụrụ iche nke ụlọ UNESCO World Heritage.
Ihe omume a na -eme site na Ọktọba 4 ruo 8, 2021, n'oge izu mbupu Rolli, yana site na Ọktọba 9 ruo 10 na ụbọchị Rolli.
Maka oge mbụ, n'oge mgbụsị akwụkwọ a, ụbọchị Rolli - ihe omume mepere ụzọ Palazzi dei Rolli, ihe nketa UNESCO - ga -adịgide otu izu.
Akụ akụ nke obodo ahụ bụ ụlọ maka nka nke jikọtara nka Italiantali-Canova, Antonello da Messina, frescoes nke narị afọ nke 17, violin Paganini, na nka Europe, ọkachasị nka Flemish.
Izu a bụ ohere ịchọpụta akụkọ obodo, otu n'ime ọdụ ụgbọ mmiri nke Mediterenian, na -adịghị anya site na Alps na Milan. Ndị ọbịa na-ezute Genoa nke a na-ahụtụbeghị mbụ, jupụtara na obí eze mara mma nke ejirila anyaụfụ chekwaa akụ ha: ogige, ubi, okirikiri frescoes, ihe osise sitere na ngwụcha Renaissance na Baroque.
A na -eme nleta ndị ahụ na nchekwa zuru oke yana na irube isi n'iwu COVID - n'efu, mana yana ọrụ ndoputa, yana oghere nke obí eze na kalenda bara ụba nke ihe nkwekọrịta.
Nleta na obí eze na ihe ncheta ga-ebido n'izu Rolli Mbupu (Ọktoba 4-8) na mmekorita ya Izu Mbupu Genoa, mmemme afọ abụọ nke na -ejikọ ọdụ ụgbọ mmiri, ndị ọrụ ụgbọ mmiri, na ndị na -arụ ọrụ lọjistik site na ụwa niile. Ndị obí eze na -akwado ọgbakọ ọgbakọ na ihe omume ọdịnala, na -abụghị obodo mmiri - onye ga -eketa akụkọ mgbe ochie, nke Maritime Republic nke ghe oghe maka ọha.
site n'ikike nke Laura Guida
Ezigbo Rolli Days (Ọktoba 9-10) dị mma maka ịchọpụta obodo ahụ n'otu aka ya, akụkọ ndị ọkachamara na ndị na-ekwu okwu sayensị bụ ndị kọọrọ akụkọ, akụkọ, na ihe ịtụnanya nke "Superba," eze nwanyị Mediterranean. Ụbọchị abụọ nke ntụrụndụ na-akwụsịghị akwụsị na nleta iji nwee mmasị na ihe ncheta kachasị mma nke obodo ahụ-obí eze Rolli na kwa ụlọ ezumike, ubi, ebe ngosi ihe mgbe ochie na ebe ndebe akwụkwọ, gụnyere ọtụtụ ụlọ emepere nke ọma maka ọha maka emume a.
Dịka ọmụmaatụ, ọmarịcha ụlọ nke Strada Nuova - nnukwu Palazzo Doria Tursi, na ubi ya abụọ - na -egosipụta violin site na Paganini, nchịkọta nka Flemish, na ọmarịcha nka dịka Penitent Magdalene nke Antonio Canova dere. Palazzo Bianco na -enye nchịkọta ọrụ nka Italiantali, Flemish na Spanish, ebe Palazzo Rosso tụrụ n'anya na arịa ụlọ mbụ ya na eserese foto nwere eserese nke Veronese, Guercino, Dürer na Van Dyck.
N'otu ụzọ ahụ, Palazzo Nicolosio Lomellino bụ ụlọ ihe owuwu ụlọ, nwere ọnụ ụlọ stucco nke ejiri frescoes nke narị afọ nke 17 chọọ ya mma na ogige nzuzo mara mma nke nwere ihe osise akụkọ ifo. Nleta Palazzo Stefano Balbi, oche nke Royal Palace Museum, bụ ohere iji chọpụta ndụ nke ndị Genoese na ndị Itali nke narị afọ nke 17, ebe a na -enwe mmasị na Halllọ enyo, ụlọ oche, na ebe ịgba egwu.
N'elu elu ụlọ nke Spinola di Pellicceria Obí, nke nwere National Gallery of Liguria, mmadụ ga -ahụ “Ecce Homo” nke kacha mma Antonello da Messina. Palazzo della Meridiana dị iche site n'ụdị nnwere onwe nke onye na -atụpụta ụkpụrụ ụlọ - Coppedè, na Palazzo Centurione Pitto na -agbagha ụlọ ndị dị na Via Garibaldi maka okirikiri fresco ya.
N'èzí ebe akụkọ ihe mere eme bụ nnukwu ụlọ Villa del Principe, ebe obibi Renaissance nke Charles V, ebe ọmarịcha ogige Ịtali na -ele n'oké osimiri gbara Admiral Andrea Doria gburugburu.
N'etiti ọmarịcha ime obodo mepere emepe maka emume a, enwerekwa narị afọ nke 16 Villa Imperiale, nke nwere ọbá akwụkwọ Lercari, nwere ogige na -adọrọ mmasị nke edoziri n'ọtụtụ mbara ala - Villa Duchessa di Galliera, nke na -achị ugwu dị n'elu obodo Voltri. ma nwee ogige ntụrụndụ narị afọ nke 18 nwere ogige ụdịrị ndị Itali; ebe nsọ na ebe ihe nkiri agbamakwụkwọ e dere na 1785; na Villa Spinola di San Pietro, ụlọ patrician nke narị afọ nke 17 nke dị na mpaghara Genoese nke Sampierdarena.
Rolli Days Live & Digital bụ emume obodo Municipality nke Genoa kwalitere ma hazie ya na ụlọ ahịa nke Genoa, Ministry of Culture - Regional Secretary of Liguria, Rolli Association of the Genoese Republic, na Mahadum Genoa.
Mmeju ahụike ụbụrụ: Ugbu a na-akwụsị Dementia?